जहाँ छोरा अभागी मानिन्छ | RABHI
जहाँ छोरा अभागी मानिन्छ
By kpcat - Tuesday, June 23, 2015 - No Comments
तपाइँले कहिलेइ यस्तो गाउँको बारेमा सुन्नुभएको छ ? जहाँ लोग्ने मानिसहरुलाई अभागी मानिन्छ ? कदापी छैन होला । महिलाहरुलाई दोश्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा बाँच्न बाध्य बनाउने परम्परागत समाजमा छोराहरुको स्थान सधै उच्च रहने गरेको देखे भोगेकाहरुका लागि यो पत्याउनै नसकिने कुरा हो । तर हाम्रै छिमेकी देश भारतको एउटा गाउँ यस्तो छ जहाँ छोराहरुलाई अभागी मानिन्छ ।
Posted by kpcat at 11:18 PM
No Comment to " जहाँ छोरा अभागी मानिन्छ "